Banyere Anyị - Ningbo Samewe Computer Co., Ltd
YU Huan Machinery Co., Ltd. bụ ụzọ nke Ningbo Shuangyu (Samewe) kọmputa Ewepụghị Knitting Machine Manufacturer Co., Ltd., guzosie ike na 1990,
Ọ bụ a sara mbara ígwè n'ichepụta enterprise tụnyere R & D, mmepụta, ahịa na ọrụ. Ebe ọ bụ na ntọala ke 1992, anyị anọwo na-ekwenyere ndị anụ ụlọ na-eduga ụlọ mmepụta ihe na enweta ọkaibe mmepụta equipments na ike nnyocha sayensị ikike
Na n'oge 2006, ụlọ ọrụ na-akpali n'ichepụta isi Ningbo China maka ibu development ohere na nkọ mkpebi siri ike na malitere na-emepụta kọmputa Ewepụghị Knitting Machines na 2007. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe nke 28000 ㎡, ụlọ ebe bụ 25000 ㎡ . Ugbu a, e nwere ihe karịrị 500 ọrụ, gụnyere oru pesonel gua ihe karịrị 40%.
Na gara aga afọ 28 , Shuang YU mgbe gbasoro ndị na-abara azụmahịa nkà ihe ọmụma: innovating na-emepe emepe ahịa, ịgbaso àgwà nke ịdị nkọ, na-emeri ndị ahịa site ọrụ. Anyị na-eduzi ma na-ume ọhụrụ, na nyekwara n'ụzọ zuru ezu na anya ọzụzụ na nkà na ụzụ nnyocha na mmepe, na-enwetara ọtụtụ mba technology nchọpụta Kemịkalụ.
Ugbu a, Shuang YU nwere satellite itieutom ke India, Turkey, Vietnam na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, anyị na ngwaahịa na e exported ka esenidụt na ọtụtụ ebe ghọtara na toro site na mpaghara ahịa.
"Nọgidenụ na-aga, anaghị echefu gị mbido uche". N'ọdịnihu mmepe, Shuang YU ga-anọgide na-agbaso ụzọ nke "High technology, elu àgwà na elu ịtụkwasị obi", na ike technology, magburu onwe ya ngwá na zuru okè management, anyị ga-enye mma ngwaahịa na ahụmahụ ozi anyị ahịa.
Innovation akwụsịtụbeghị, ọdịnihu enweghị nsọtụ. Shuang YU na-atụ anya na-aga n'ihu-aka-na-n'aka gị maka ibe ebube!